मेरो बाऊले भन्नुहुन्छः तिमीहरूले पढेको के काम ? जबसम्म तिमीहरूले आफूले पढेको कुरा आफ्नै जीवनमा लागू गर्दैनौ भने त्यस्तो पढाईको के अर्थ ? वास्तवमा प्रश्न सही हो । आजकल पढेलेखेका व्यक्तिहरूको व्यवहार आकाश जमिन फरक छ । यस्तै हो भने देश बदल्ने समाज सुधार्ने भन्ने कुरा किमार्थ ‘गफ’ मात्र हो । गफ गरेर समय कटाउनु भनेको फजूल कार्य हो । बाऊकै युक्तिमा नेपाली समाजमा विद्यमान एउटा भनाइलाई जाँच्न खोज्छु । ‘नारी र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्’ भन्ने बोली यही हो । तर, के यो व्यहारमा लागू भएको छ त ? यो मननीय सवाल हो । हामीले भन्ने पुरुष प्रधान समाजमा पुरुषमाथि नै हिंसा हुन्छ÷भइरहेको छ । ती हिंसा जुन रुपमा जसरी बाहिर आउनुपर्ने हो आएका छैनन् बाहिर ल्याउदैनन् । अझ भनौं महिलालाई दुख (दर्द) हुने पुरुष (मर्द) लाई भने दुख नहुने भनाई वालमष्तिकमै घुसाईन्छ ।
हो यस्तै विषयलाई लिएर सन् १९९९ मा Jerome Teelucksingh ले आफ्नो पिताको जन्मदिनको अबसर पारेर नोभेम्बर १९ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवस मनाउन सुरू गरेका थिए । तर, पुरुष प्रधान मानिएको हाम्रो देशलाई दिवस नै अत्तोपत्तो छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवसका दिन पुरुषहरुले समाजका लागि गरेका योगदानको कदर गर्दै लैङगिक समानता, पुरुषको शारीरिक, मानसिक तथा लैंगिक स्वास्थको ख्याल गर्दै मनाईने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस झैं पुरुष दिवस पनि ८० भन्दा बढी मुलुकहरुले मनाउँदै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्रहरु भारत,चीन अनि पाकिस्तानमा समेत पुरुष दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् २००७ देखि भारतले यो दिवस मनाउन थालेता पनि २००९ देखि मात्र व्यावसायिक कम्पनीहरुले प्रायोजन गर्न थालेको देखिन्छ । सन् २०१४ मा नयाँ दिल्लीमा एक एजुकेशन कन्सलटेन्सीले पुरुष दिवसको अवसर पारेर चित्रकला प्रर्दशनी समेत गरेको थियो । सोही वर्ष कलकत्तामा भने बृद्धअवस्थामा हुने पुरुष हिंसा बिरुद्ध नारा लगाउँदै ¥याली निकालिएको थियो । नारामा कानुनमा किन लैङ्गिक समानता छैन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठाईएको थियो । साथै चेन्नईमा पुरुष संरक्षण मन्त्रालय वा आयोगको माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । सन् २०१८ मा अभिजन नामक संस्थाले सेक्सन ४९८ ए कानुनको संशोधन माग गर्दै कानुनमा लैंगिक समानताको माग गरेका थिए ।
पकिस्तानमा भने राईट्स एण्ड राईट्स नामक संस्थाले एक सेमिनार आयोजना गरेर सन् २०१० बाट औपचारिक रुपम पुरुष दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा वकील, शिक्षाकर्मी, समाजसेवी तथा महिला अधिकार सम्बन्धि काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थिती थियो। कार्यक्रमका संयोजक युसफ जमल अनुसार केही नारीवादी संस्थाले पुरुषहरुलाई राक्षसको रुपमा समेत प्रस्तुत गरेको उनको टिप्पणी गरेका थिए । साथै एकपक्षीय कानुनका कारण पाकिस्तानमा उच्च अध्यनमा पुरुषको सहभागिता घट्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।
छिमेकी मुलुकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवस मनाउँदै लङ्गिक समानताको पहल थालनी गरेपनि नेपालमा भने यो दिवस आएको–गएको अत्तोपत्तो हुँदैन। यतिमात्र हैन नेपालको कुनै पनि सामाजिक संस्था, सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था वा कुनै बौद्धिक व्यक्तित्वले यस विषयमा चर्चा बहस गरेको सुनिएकै छैन् । यस विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । अच्चम के लाग्छ भने प्रहरीले समेत महिला हिंसाका उजूरी लगायतका विषयको तथ्याङ्क राख्ने गरेपनि पुरुष हिंसा बारे त्यस्तो तथ्य नै राखेको भेटिएन । के नेपालमा महिला लक्षित कानुनको दुरुपयोग नभएकै हो त ? कि पितृसत्तात्मक समाजमा पितृहरुकै क्रमकाण्ड भएको हो ? यो गम्भीर सोचनिय विषय छ ।
भारतमा गरिएको एक अनुसन्धानको रिपोर्ट अनुसार अप्रिल २०१३ देखि जुलाई २०१४ सम्मको जवर्जस्ती करणी मुद्दा हलिएकोमा ५३ प्रतिशत फर्जी मुद्दा पाइएको थियो । के नेपालमा यी यस्ता मुद्दा परेकै छैन त ? छन् भने खोजी गर्दा किन पाइदैन ? ३३ प्रतिशत महिला अधिकारले पुग्दैन भन्दै हिड्नेहरु आफ्नो समकक्षी लिङ्गको अधिकारका विषयमा कतिको जानकार छन् ? के आफ्नो मात्रै अधिकारको माग वा अरु नहेरी आफ्नो मात्रै पीडाको प्रस्फुटन गरेर लैङ्गकिक समानताको मुद्दा कतिको न्यायोचित छ ? नेपाल भित्रै महिलाहिंसा सम्बन्धि काम गर्ने संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरुको महिलाले आफ्नो घर उजाड पारेको तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थाले त्यस्ता पुरुष हिंसाका तथ्याङ् कति राखेको छ ? पुरुष हिंसा गर्ने त्यस्ता महिलालाई कारवाहीको दायरा ल्याउन सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले कस्ता कार्यक्रम,गोष्ठी वा सेमिनारको आयोजना गरेका छन ? हैन भने आफुले खनेको खाल्डोमा आफै नपर्ला भन्न सकिन्न किनकि ती मुद्दाहरुमा पुरुषसँगै पुरुषका घरपरिवार समेत यी यस्ता मुद्दामा कहिले सासू नन्द भई पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यो लेख लेखिरँहदा लेखक नारीवाद बिरोधी नभई नारीकै लागि लेखिएको लेख भएको पुष्टि गर्न चाहान्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना !
प्रकाशित ४ मङ्गसिर २0७६ , बुधबार | 2019-11-20 08:23:28